JINGHPAW KASA: ဗမာစစ်တပ်အတွင်းသို့ မိုးကြိုးပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား
အောက်တိုဘာ (၆) စနေ
ကချင်ပြည်နယ် အေအိုင်အိုအစိုးရ မြောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၁) နယ်မြေဖြစ်သော ဆဒုံး ဒေသေတွင် ရာက်ရှိနေသော ဗမာစစ်တပ်များမှ အောက်တိုဘာ (၅) ရက်နေ့တွင် ဘွမ်ဝါ၊ ဆဂပါ ကျေးရွာများသို့ လိုက်နက်ကြီးဖြင့် (၅) ကြိမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဆဒုံး ဗမာစစ်တပ်မှ ပစ်လိုက်သော လက်နက်ကြီးများသည် ပြည်သူများကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိသော်လည်း ရွာသားများ၏ မှည့်ဝင်းနေပြီးဖြစ်သော စပါးခင်းများသို့ ကျရောက်ပေါက်ကွဲ၍ စပါးခင်းများပျက်စီးသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ အောက်တိုဘာ (၄) ရက်မနက်တွင် ဆဒုံးဒေသ လုထောင်တွင် တပ်စွဲထားသော ဗမာစစ်တပ်သို့ မိုးကြိုးပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ ဤမိုးကြိုးပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဗမာစစ်သား (၂) ဦး ရူးသွတ်သွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
The Burmese Government Battalion, Who arrived in Sadung region, fired five times with heavy weapon in the Bum Wa, Saga Pa villages which in under the KIA (1st) Brigade area on the 5th October, according to the KIA front-line report. It didn't hurt to the civilians but the civilians ripen paddy fields were damaged seriously. The farmer were very scared and sad for the destroying.
On the previous day of the same region of Lu Htawng, Sadung, two Burmese soldiers were been mad of the thunderclap hitting.
Karai kasang gaw anhte hpe aten tup bau sin nga ai.karai kasang hpe galoi mung chye chyu shakawn ga.
Thar Gyi said...
ထူးဆန်းပါပေ့ ကတွတ်ပီ မိုးတွင်းမှာမိုးကြိုးပစ်ရတယ်လို့
KIA အစိုးရကဘယ်တုံးကများဖွဲ့လိုက်တာလဲ မသိလို့ပါ
စာလုံးပေါင်းလေးတွေလည်းပြင်လိုက်ပါအုံး ဖတ်ရတာ တညိုးဂျီး
ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာကိုပဲ KIA အစိုးရ KIOအစိုးရ နဲ့ တစ်ဖွဲ့တည်းကိုအစိုးရနှစ်ခုတောင်ဖွဲ့ထားတာလား နားမလည်လို့ပါ ပြောင်တာဟုတ်ဖူးနော်
Myen nju tim myen mying grai ra ma ai ni hpe grai mau sai loo.,
mu mada ai lam ni , hpaji jaw hkat ga myu tsaw ma nang ni e
Jinghpaw kasa kaw nna jinghpaw hku nna shiga n mara mat ai hpe mau nga ai.
Myen kasa ngu yang????
jinghpaw hku gaw jinghpaw kasa website kaw mai yu ai
awng mai said...
myen hku sha ka na mara sa na re ngu di nna shiga jaw da ai hpe hkau nlu la sam ai.
အနော်က ပဲပြုပ်ဟုတ်ဖူးဂျ ပဲပုပ် ကလေးပါဂျာ တင်ဆက်ပုံလေးလိုနေလို့ပြောပြတာပါဂျာ ဝေဖန်လို့ရတယ်ဆိုလို့ပါ ခင်ညာ
jinghpawkasa hpe bang shagu myne hku nna sha pru nga ai. Gara hta Jinghpaw hku mara da ma ai kun?
အနော်က ပဲပြုပ်ဟုတ်ဖူးဂျ ပဲပုပ်လေးပါ တင်ဆက်ပုံလေးလိုနေတယ်ထင်လို့ပြောပြတာပါဂျာ စ်ိတ်ဆိုးပါနဲ့နော်နော်...
N chye shi yang dai hku shawng san ai baw re.Mara tam ai zawn nga ga hpe hkum sha ga.Jing hpaw sari hpoi ai.Jing hpaw hku hti mayu yang jinghpawkasa.org kaw sa hti u yaw...
Jinghpaw wp ni kaw mung mying shaga,manu ai ni.grai nga lai lee.
သောက် သူတောင်းစား မင်းတောက်အခုမင်အမျိုးထိလို့နာနေတာမဟုတ် လား မင်းကမှမျက်ကန်း နေတာ မင်းအမျိုးကောင်းလား
မကောင်းလား ကမ္ဘာကတောင် သိနေတာပဲ ကြည့်ရတာ မင်းအရပ်ပုတဲ့
အမျိုးလား phwe soe ဟိုဟာနဲ့ အမျိုးတော်တယ်ထင်တယ် ဟိုတိ
ဒီဖြတ် ခလယ်မှာညှပ် နဲ့ ကိုယ့်ဘက်သာ ခြေယှက် တွင်းတူး မြေခွေးဘီလူး အဖွဲ့ ကထင်တယ် မင်းဗမာတောင် မဟုတ်လောက်ဘူး
phwne soe .....phwne soe ....လူလူချင်းတွေပါပဲ လူ့ အခြေခံသဘော